Sleepwalking - lokhu kuvamile impela. Ngokombono ongokwesayensi, lesi simanga libizwa somnambulism. Kulesi sihloko sizoxoxa lokho sleepwalking, izizathu kuveziwe kulo kuphakama, thola ukuthi zikhona yini ezinye izindlela zokwelapha ke.
Sleepwalking - lena isimo eqondile umuntu olele, lapho uphoqelekile ukuba yezimo abhekene enze izenzo abazi lutho neze futhi ngezinye izikhathi aluhlaza cwe. Into ezithakazelisayo kakhulu kukho konke lokhu, ukuthi abantu ngemva kokuvusa ungakhumbuli lutho! Lomuntu ohamba alele ongenza noma yiziphi izenzo eziyinkimbinkimbi kakhulu, njengezinga bavulela ukushiya indlu, ukuwela umgwaqo lapho izimoto uhlanga ngisho ukukhuluma. Ngezinye izikhathi, lezi "zombies" kukhona nonya, kodwa ezimweni eziningi bona ngokwabo baqamekela ezihlukahlukene izingozi phakathi nobusuku travel.
Akunjalo kudala, kwakukhona umbono elinamandla ezingqondweni zabantu ukuthi somnambulism kuhlobene umsebenzi zenyanga. Akukhona ngakho! Sleepwalking, izimbangela zazo angakafakwa elicwengwé kakhulu, akuwona umphumela womsebenzi walo. Ukuthi akekho ubufakazi besayensi, uthabathe kucatshangwa iqiniso - lokhu akufanele ngokomsebenzi engiwenzayo kakhulu! Nokho, kuze kube manje, abanye ososayensi musa ukuphika ukuthi ezinye umthelela psyche zabantu Luna iyakwazi ukunikeza konke.
Okumangazayo sleepwalking: izimbangela zesifo zalesi simo
njalo vula amehlo umuntu olele;
Isikhucululi kuthatha ukuhlala phansi noma omunye isikhundla angavaleki;
indoda ngesikhathi sokulala uqala ukunyakaza kuphi noma enze noma yimuphi omunye isenzo;
indoda ovukayo azikhunjulwa lokho okwakwenzeke kuyo ebusuku, yena udidekile neliphithene.
Sleepwalking kwabadala. izizathu
nezifo eziphathelene emsebenzini ingqondo;
enobuthi izidakamizwa imiphumela emzimbeni;
iyiphi ukugula okungathí sina;
Izingane sleepwalking. izizathu
Isikhathi esining impela lokhu mkhuba ongavamile ukubona izingane zihlupheka, kodwa lo mshini wezenzo kulokhu ukuhluka. Uma kukhona ukwephulwa komthetho okubi emzimbeni wengane, kusukela ngineminyaka engu-somnambulism iphele. Izimbangela ingane "ubusuku travel" kancane, kodwa ngamunye wabo kudinga ukunakekelwa okukhethekile:
sinemizwa nokucindezeleka wengane;
nokungalali, ozobakhona isikhathi eside;
ukukhathala enamandla kakhulu noma ukukhathala.
I jikelele isithombe somnambulism
Ngomqondo onabile, sleepwalking, ogama izimbangela kungukuthi aqondakale ngokugcwele - ngempela into ethandwa. Senzeka kokubili abadala kanye nezingane (ezineminyaka engu-6 ubudala). Iziqephu ka somnambulism usuku imizuzwana embalwa ihora noma ngaphezulu. Ngokuvamile, umuntu olele "kuza ekuphileni" ekuseni nobusuku (esigabeni lesithathu noma lesine ukulala). Uma ukuhlasela kwenzeke njalo, kufanele ubone udokotela. Njengoba kungekho izindlela ezithile ekwelapheni somnambulism cha, impatho kuzoncika izimbangela zalesi simo, futhi, njengoba siye waphawula kakade, eqenjini ngalinye ubudala zihlukile. Nokho, kukhona ngento eyodwa - kungcono sitholwa njengefa.
Amangqamuzana amhlophe egazi kuleli umchamo wengane yanda, noma izimpawu zokuqala ukutheleleka
Izitshalo ezisohlwini Red egwalweni Rostov esifundeni. izinyoni ezingavamile futhi ezisengcupheni izitshalo we Rostov esifundeni
"Itiye Matsesta". Iziyalezo ukulungiswa izincomo kanye nokubuyekeza
Amaphilisi homeopathic "tenoten": yokusetshenziswa